Uhlaziyo olutsha lweTelegram ngophuculo oluninzi olubalulekileyo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Jika uhlaziyo olutsha lweTelegram. Rhoqo emva kweeveki ezimbalwa isicelo sokuthumela imiyalezo sihlaziywa ngezinto ezahlukeneyo ezenziwayo kwimisebenzi yaso. Ukuba kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo bekunjalo kunokwenzeka ukuba wenze ngokusesikweni iphepha lodonga Kwincoko, ngoku basishiya notshintsho olubaluleke kakhulu. Kule meko, ukususwa kwemiyalezo yeyona nto iphambili, kuba ifumana uphuculo.
Kodwa ayisiyiyo kuphela kwento esiyifumanayo kule nguqulo intsha yeTelegram. Sikwafumana i- Injini yokukhangela ye-emoji okanye ukuthumela umyalezo ongaziwayo ngaphakathi kwesicelo uqobo. Uthotho lotshintsho olwenzelwe ukuvumela ukusetyenziswa ngcono kwayo kwi-Android.
1 Ukucima imiyalezo
2 Umfumani we-Emoji
3 Ukudlulisela ngokungaziwayo
Ukucima imiyalezo akuyona into entsha kwiTelegram, kuba ngumsebenzi ibifumaneka okwexeshana kwi-app yemiyalezo ethandwayo. Nangona kude kube ngoku, bekukho uthotho lwemida ebalulekileyo kuyo, oko kwakuthetha ukuba abasebenzisi babengenayo inkululeko engako xa beyisebenzisa. Ngolu hlaziyo lutsha, uninzi lwalemida kule nto isusiwe. Ukuvuya kwabaninzi.
Utshintsho lokuqala kukuba ngoku siya kuba nakho ukucima yonke imiyalezo esiyifunayo. Oko kukuthi, ukuba uthumele umyalezo kwiminyaka emibini edlulileyo, uya kuba nakho ukuwucima ngaphandle kwengxaki kwisicelo. Ucingo luthathe isigqibo sokususa naliphi na ixesha elimiselweyo malunga noku. Konke oku kusetyenziso olungcono kubasebenzisi.
Nangona kusenokwenzeka ukuba eyona nto imangalisayo kukuba olu tshintsho alusebenzi kuphela kwimiyalezo esiyithumeleyo. Kananjalo imiyalezo esizifumeneyo kwiincoko zethu kwisicelo ziya kucinywa. Singayicima imiyalezo esithunyelwe ngomnye umntu kwiincoko zeTelegram. Ke nabanye abantu banokucima imiyalezo yethu. Ukongeza, kule ngqiqo, izaziso azifunyanwa xa le miyalezo icinyiwe. Ngaphandle kwamathandabuzo lutshintsho olunomdla kakhulu kwiapp eyaziwayo.
Okwangoku lo msebenzi unokwenzeka kuphela kwiingxoxo zabucala. Kwincoko yeqela ayiziswanga, kwaye asazi ukuba inkampani inezicwangciso zokwenza njalo okanye hayi kungekudala. Kodwa kwiingxoxo zabucala kuya kufuneka ukwazi ukuyisebenzisa ngoku.
Umsebenzi wokuzonwabisa kunye nokuzonwabisa wabasebenzisi beTelegram. Isicelo siphucula kakhulu injini yokukhangela ye-emoji kunye nee-GIF zoopopayi. Ukuze ukhangelo olulula kakhulu lube nakho ukwenziwa ngalo lonke ixesha. Kule meko, konke okufuneka ukwenze kukufaka inkcazo yento ofuna ukuyisebenzisa.
Ke ngoko, ukuba ufuna i-emoji eyonwabileyo okanye eyonwabileyo, kuya kufuneka ufake eso sicatshulwa kwiinjini yokukhangela. Inokwenziwa nangalo naluphi na ulwimi ukuba injini yokukhangela iyayixhasa. Ke, xa oku kwenziwe, iziphumo zolu phando ziya kuvela kunye nee-emojis ezilinganayo kwaye ke ngoko sinokuzisebenzisa kwiingxoxo zethu kwisicelo ngokwaso ngendlela elula.
Utshintsho lokugqibela oluza kuthi kuhlaziyo lweTelegram luhambelana ngokusondeleyo nemfihlo. Imalunga nokulawula ukuba ingaba imiyalezo esiyithumelayo kunye nomnye umntu oya phambili ibandakanya ikhonkco kwiprofayile yomsebenzisi okanye hayi. Ngokuzenzekelayo eli khonkco lifakiwe. Oko kuthetha ukuba nawuphina umntu ofunda umyalezo ovela kuwe oye wathunyelwa, ungaya kwiprofayile yakho ngokuchukumisa igama yomsebenzisi. Le yinto etshintshiweyo ngoku.
Kuba ngaphakathi kuseto lweTelegram, ngaphakathi kubucala, sinecandelo lemiyalezo ethunyelweyo. Kweli candelo, abasebenzisi banikwa ithuba lokunciphisa ukuba ngubani onokufikelela phambili kule miyalezo ngale khonkco. Ungavumela wonke umntu, ukhethe oonxibelelwano kuphela okanye akukho mntu unokukubona. Ngayiphi na imeko, nakwindlela yokugqibela, igama liya kuqhubeka ukuboniswa, kodwa abasebenzisi abayi kuba nakho ukucofa kuyo kwaye bajonge iprofayile yakho ngaloo ndlela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ukuhlaziywa kweTelegram ngokususwa komyalezo okuphuculweyo
IPocophone F1 ifumana imowudi yeTurbo yeMidlalo